किन मास्क लगाउँदैनन् ट्रम्प ? - Everest Dainik - News from Nepal
२०७६, २२ चैत्र शनिबार
अमेरिका: अमेरिकामा जारी गरिएको नयाँ मेडिकल दिशानिर्देशमा कोरोना भाइरसको जोखिमका कारण सबैलाई मास्क लगाउन अनिवार्य गरिएको छ। तर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले भने आफूले मास्क नलगाउने बताएका छन्।
उनले भनेका छन्, ‘राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, तानाशाह, राजा, रानीलाई म कसरी मास्क लगाएर स्वागत गरौँ।’ उनले शुक्रबार जारी उक्त निर्देशन पालना गर्न आफू बाध्य नभएको पनि बताएका छन्।
याे पनि पढ्नुस आइतबार कतिले छाडे काठमाडौं उपत्यका?
अमेरिका अहिले कोरोनाको चपेटामा छ । त्यहाँ कोरोना संक्रमितको संख्या २ लाख ७० हजार नाघिसकेको छ भने मृत्यु हुनेको संख्या ७ हजार नाघेको छ ।
अहिलेसम्म अमेरिकाका स्वास्थ्य अधिकारीहरुले बताउँदै आएका थिए– बिरामी र तिनको उपचार तथा रेखदेख गर्नेले मात्रै मास्क लगाउनु जरुरी छ।
याे पनि पढ्नुस लकडाउनमा पनि जारी छ रेलमार्गको काम
शुक्रबार (हिजो) बल्ल सबैलाई मास्क लगाउन भनिएको छ। यद्यपि, आम मानिसलाई सर्जिकल मास्क नलगाउन भनिएको छ किनकी यस्तो मास्कको अभाव नै छ अमेरिकामा पनि । बीबीसी
ट्याग्स: कोरोना भाइरस, डोनाल्ड ट्रम्प, मास्क
किसानलाई धान थन्काउन चटारो (तस्बिर)
दक्षिण कोरियामा जनसंख्या घट्दो, स्थायी बसोबास गर्नेले पुनः प्रवेशाज्ञा लिनुपर्ने